Ukugqithisa i-Clock Demonstration
Ukuphendula kukaBriggs-Rauscher, eyaziwa nangokuthi 'iwashi eliqhawulayo', ngenye yeendlela eziqhelekileyo ezibonakalisa ukuphendulwa kwe-chemical oscillator. Impendulo iqala xa izisombululo ezintathu ezingenambala zidibene kunye. Umbala womxube obangelwayo uya kufutshane phakathi kwebala, i-amber, kunye ne-blue blue for about 3-5 minutes. Isisombululo siphela njengomxube omnyama obomvu.
Yongeza i-43 g ye-potassium iodate (i-KIO 3 ) ukuya ku-~ 800mL amanzi adibeneyo. Gxila kwi-4.5 mL i- sulfuric acid (H 2 SO 4 ). Qhubeka uvuselela kude idiodeji ye potassium ichithwe. Ukuxuba kwi-1 L.
Yongeza 15.6 g malonic acid (HOOCCH 2 COOH) kunye ne-3.4 g ye-manganese sulfate monohydrate (MnSO 4. H 2 O) ukuya ku-800mL amanzi adibeneyo. Yongeza 4 g ye-stitch vitex. Gxuma de dele. Ukuxuba kwi-1 L.
Ukuguqula i-400 mL ye-30% ye-hydrogen peroxide (H 2 O2) ukuya ku-1 L.
300 mL yesisombululo ngasinye
Beka ibha evuselelayo kwi-beaker enkulu.
Dlulisa i-300 mL nganye yesisombululo A kunye no-B kwi-beaker.
Vula isitya eshukumisayo. Lungisa isantya ukuvelisa i-vortex enkulu.
Yongeza i-300 mL yesisombululo C kwi-beaker. Qiniseka ukuba ungeze isisombululo C emva kokuxubusha izisombululo A + B okanye omnye umboniso awuyi kusebenza. Jabulela!
Oku kubonakalisa iodine. Gqoka izigulane zokhuseleko kunye neiglavu kwaye wenze umboniso kwigumbi elinomoya ophuculweyo, mhlawumbi phantsi kwendawo yokuphuza umoya. Sebenzisa unonophelo xa ulungiselela izisombululo , njengoko amakhemikhali abandakanya ukugxekezela kunye ne- oxidizing agents .
Nciphisa iodine ngokuyinciphisa kwi-iodide. Yongeza ~ 10 g ye-thiosulfate kwi-sodium. Gquba kude umxube ube ngumbala. Impendulo phakathi kwe-iodine kunye ne-thiosulfate inzima kwaye umxube unokutshisa. Emva kokupholisa, umxube ongenakupheliswa unokuhlamba phantsi emanzini.
Ukuphendula ngale ndlela kungaphunyezwa zibe zimbini zempendulo :
Ukuphendula ngale ndlela kungenziwa yinkqubo enzulu eyenziwa xa i-intlanzi iphantsi, okanye yinkqubo engekhoyo xa i-i-concentration iphakamileyo. Zombini iinkqubo zinciphisa iodode kwi-acid ye-hypoiodous. Inkqubo enkulu kakhulu yenza i-asidi ye-hypoiodous ngezinga elikhawulezileyo kunenkqubo engeyiyo.
Imveliso ye-HO ye-reaction yokuqala yempembelelo yi-reactant kwi-reaction component yesibini:
I-HOI + CH 2 (CO 2 H) 2 -> ICH (CO 2 H) 2 + H 2 O
Le mpendulo iqulethwe neendlela ezimbini zokuphendula:
I-+ HOI + H + -> I- 2 + H 2 O
I- 2 CH 2 (CO 2 H) 2 -> ICH 2 (CO 2 H) 2 + H + + I -
Umbala obomvu uphuma kwimveliso ye-I 2 . I-form 2 iifom ngenxa yokuveliswa kwe-HOI ngokukhawuleza ngexesha lomsebenzi omkhulu. Xa inkqubo enzulu isenzeka, i-HOI idalwe ngokukhawuleza kunokuba ingadliwa. Ezinye ze-HOI zisetyenziselwa ixesha elidlulileyo kuncitshiswa ngu- hydrogen peroxide ukuba ndi-. Ukunyuka kwam I-intlanzi ifikelele kwindawo apho inqubo engenziwanga. Nangona kunjalo, inqubo engekho nto ivelise i-HOI ngokukhawuleza njengendlela yokuqhelanisa, ngoko umbala obalayo uqala ukucima njengoko mna 2 udla ngokukhawuleza kunokuba ungadalwa.
Ekugqibeleni i-intlanzi iyancipha ngokukhawuleza ukwenzela ukuba inkqubo yokuqalisa iqalise kwakhona ukuze umjikelezo uhlaziywe.
Umbala ohlaza okomvu wubangelwa yi-I-kunye no- 2 ndibophelela kwisitashi esikhona kwisisombululo.
BZ Shakhashiri, ngo-1985, iMiboniso yeChimikhali : I-Handbook yootitshala beChemistry, vol. 2 , iphe. 248-256.
Indlela yokwenza i-Microwave iCD (ngokukhuselekileyo)
Amagama angama-10 anamangalisa iDinosaur
Iindawo ezili-15 zeeMidlalo eziHle
I-Glow Stick Test - Umlinganiselo weMichimo yeChimicals
Amadolophu kunye neNqweno yokuBamba iMidlalo yeOlimpiki
Ngaba Kukulungele Ukutshiza Isibilini Sakho Nge-Stick Stick?
Umsebenzi we-Quadratic - Iinguqu kwiParabola